Khasnadda xayawaanka ee 'Sable sable' oo dhaqameed iyo faro badan | Safarka Absolut
Luis Martinez | | la fahmay
Sable, waa hanti xayawaan Ruush ah, waa a mustelid taasi waxaa iska leh isla qoyska xayawaanka sida nafaqada iyo calaamadaha. Waa a naasleyda wax quudhsata kaasoo dhogortiisu nasiib daro ku caan baxday warshadaha soo saarista dharka.
Laakiin wixii ka sarreeya, sidaan kuu sheegnay, waa a khasnadda noolaha ee Ruushka. Waxay ku nooshahay waddankan oo dhan, badanaa koonfurta, laakiin dadkeedu sidoo kale way sii kordhayaan Mongolia wuxuuna gaaraa jasiiradda Hokkaido, ee Japan. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato xayawaankan saaxiibtinimada leh, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sii wadato akhriska.
1 Maxay sable u tahay khasnad xayawaan Ruush ah
1.1 Astaamaha astaanta ee sable
2 Waa maxay sable, khasnadda xoolaha Ruushka
2.1 Caadooyinka sable
Maxay sable u tahay khasnad xayawaan Ruush ah
Talaado zibellina, sida xayawaankani cilmi ahaan loo yaqaan, waa hanti u taal Ruushka sabab aasaasi ah: waa mid ka mid ah noocyada ka muhiimsan oo aad uga tiro badan waddankaas weyn.
Astaamaha astaanta ee sable
Shaaribkani wuxuu degenaa gobollada Ruushka tan iyo waagii beryay. Xitaa magiciisa ayaa umuuqda inuu ka soo jeedo luqadaha Slavic. Gaar ahaan ereyga Ruushka zobol, taas oo iyaduna u horseedi lahayd ereyada zibelline ka yimid Faransiiska iyo sable o cebelina ka yimid Castilian.
Laakiin way uga muhiimsan tahay Ruushka maxaa yeelay waa mid ka mid ah xayawaannada ugu caansan dalkaas, sidaas darteedna, mid ka mid ah astaan ​​ahaan. Kahor intaanay dadkeedu hoos u dhicin, waxay deggenayd koonfurta iyo woqooyiga dalka, oo ay ku jiraan dhammaan Yurubta Ruushka y Siberia (xitaa iyada oo loo marayo qaybteeda woqooyi waxay gaadhay illaa iyo inta Japan, sidaan kuu sheegnay). Laakiin sidoo kale waxay ahayd gudaha Poland iyo jasiiradda sinainavia.
Ruushka ayaa aad u qiimeeya xayawaankan oo bartamihii qarnigii la soo dhaafay, markii uu damacsanaa inuu dabargo, waxay bilaabeen dib u soo noolaynta goobihii ay ku noolayd. Tan awgeed, nooluhu hadda wuxuu ku jiraa caafimaad aad u wanaagsan wuxuuna xitaa ku faafay dhulal waaweyn sida buuraha bariga asiya waxayna leedahay in kabadan shan iyo toban hoosaadyo.
Waa maxay sable, khasnadda xoolaha Ruushka
Waa xayawaan yar oo la mid ah otter, oo ay reer wadaagaan, sidaan soo sheegnay. Badanaa wuxuu ku nool yahay geed cufan, geedo kedar ah ama geedo yaryar iyo, si gaar ah, godadka guud ahaan kudhow wabiyada. Waa iska fadhiisasho inkasta oo, markii cunnadiisu gabaabsi tahay, ay socon karto ilaa laba iyo toban kiilomitir maalintii si loo helo quud.
Jir ahaan, suufku wuxuu leeyahay jir yar oo lugaha gaagaaban iyo dabo dheer oo ay ka buuxaan timo badan. Tijaabooyinka ragga badanaa wey qiyaastaan konton iyo shan sentimitir, halka dheddigga ay dhif ka badato soddon iyo shan. Sidoo kale, kan hore wuxuu miisaankiisu ku dhow yahay laba kiilo. Labaduba waxay leeyihiin madax gaaban iyo muuse, dhago yaryar iyo shaarib dheer. Ugu dambeyntii, jaakaddiisu waa midab madow ama bunni, dhalaalaya xilliga jiilaalka, in kasta oo ay jiraan tijaabooyin leh timo khafiif ah.
Sable Marten oo leh dhogor madow
Marten badanaa wuxuu ka soo baxaa godkiisa saacadaha hore ee maalinta, gaar ahaan xilliga weheshiga, ee dhaca xilliga xagaaga. Inta lagu jiro shukaansiga, ragga ayaa ordaya oo ku boodaya dumarka waxayna ku dagaalamayaan dhexdooda si loo aqbalo. Mar alla markii ay uur yeeshaan, uurku wuxuu qaadanayaa toban bilood waana ay leeyihiin qashin ka kooban saddex ilaa toddobo dhalinyaro ah.
Waxay ku dhasheen culeys qiyaastii ah soddon iyo shan garaam iyo indhahayga oo xidhan. Waxay qaadanayaan ku dhowaad bil in la furo. Inta lagu jiro waqtigaas waxaa quudiya oo daryeela hooyada, oo siisa caanaha naaska ka dibna cunto adag oo adag oo ay dib u soo celiyaan. Waxay ka baxaan godka goor hore, laakiin ma gaaraan biseyl ilaa ay ka gaaraan laba sano iyo noolow qiyaastii siddeed iyo toban.
Waa xayawaan wax walba waxayna ku quudataa badanaa jiirka yar yar, shimbiraha iyo naasleyda kale ee yaryar sida bakaylaha. Laakiin sidoo kale waxay cuntaa miraha duurjoogta ah iyo xitaa kalluunka ay ku qabtaan lugaha hore. Marka jiilaalku soo dhowaado, way dhacdaa ururinta cuntada godkeeda si aan dhaxalka ugu gaajoon.
Leh a ur xoog leh Waxay u adeegtaa labadaba inay qabato ugaadhsigeeda iyo inay ka cararaan ugaarsadayaasha iyo xitaa inay calaamadeeyaan dhulkeeda. Cadawgooda ugu xun waxaa ka mid ah shabeel, yeey, dawaco, lynxes, gorgor, iyo guumaysta.
Sable Marten wuxuu dul fadhiistay jirridda geedka
Marka laga hadlayo dhaqankeeda, duurka dhexdiisa waxay noqon kartaa xayawaan rabshad badan. Oo waxaan u leenahay sidan sababtoo ah tijaabooyinka ayaa la soo saaray. Xaaladahan oo kale waxay leeyihiin dabeecad dabacsan oo ciyaar leh. Laakiin waa inaadan iloobin inay si sax ah u saabsan tahay xayawaanka duurjoogta ah sidaa darteedna aakhiradooda aysan marna u adeegeyn sidii xayawaan gurijoog ah
Gebogebo, sable, khasnadda xoolaha Ruushka, waa mid ka mid ah noocyada astaanta u ah dalkaas weyn. Intaas waxaa sii dheer, dhulalkeeda ballaaran waa hoyga ay ku nool yihiin xayawaanadan u muuqda kuwa saaxiibtinimada leh, oo ku faafay Shiinaha. Sidaas ayaa loola xiriiriyaa marten-ka Ruushka inay ka soo muuqatay filimaan fara badan, dokumentiyo iyo shaqooyin suugaaneed oo laga sameeyay ama lagu dejiyay qarankaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Sable sable, khasnadda xoolaha Ruushka
The flora ee Venezuela